Apps for garoonka - AppStudio ee ArcGIS - Geofumadas
Abriil, 2019 ArcGIS-ESRI, tabo cusub
Dhowr maalmood ka hor waxaan ka qaybqaadannay oo ku faafinay webinar diiradda saara qalabyada ay bixiso ArcGIS, ee dhismaha codsiyada. Waxa uu ka qayb-galay lagacna aad u Ana Vidal iyo Franco Viola, kuwaas oo mabda 'ku adkeeyay hore ee AppStudio for ArcGIS, sharraxaad ka yar sida ArcGIS interface ku xiran yahay dhammaan qaybaha ay, codsiyada desktop labadaba sida isticmaalka internetka.
Ajandaha webinar waxaa lagu qeexay afar qodob oo asaasi ah: sida xulashada mawduucyada, qaabeynta qaabka, iyo rikoodhka codsiyada websaydhka ee platformyada ama dukaamada halkaas oo dadka isticmaala ay soo dejisan karaan codsiyada waxayna u isticmaalaan meelaha shaqsiyeed ama shaqadooda. Faa'iidada codsiyada la abuuray waxay ku xiran tahay waxa loo abuuray, markaa ArcGIS waxay ku calaamadeyneysaa codsiyada:
Xafiiska - desktop: (oo la xidhiidha dhammaan barnaamijyada la xiriira ArcGIS-da gudaha maabka, sida Microsoft Office)
Campo: waa codsiyada bixiya xarumaha xog ururinta goobaha, sida Isu duwaha ArcGIS ama Navigator
Bulshada: waa codsiyada ay dadka isticmaali karaan oo ay sheegi karaan wax kasta oo ay ka qabaan bey'ada, ka wada shaqeynta ururinta macluumaadka GIS, waxa haatan la yiraahdo
Abuurayaasha: Waxaa loo qorsheeyay in la abuuro codsiyada web ama qalab kasta oo mobile (Tixgelinta) iyada oo arrimo configurable, AppBuilder Web for ArcGIS, ama ninkii of lagacna aad AppStudio ee ArcGIS.
AppStudio for Arcgis, waa codsi abuuraya "Codsiyada Muusikada ah ee Badbaadinta", taas oo ah, waxaa loo isticmaali karaa PC, kumbuyuutar ama casriga. Waxaa lagu qeexay laba qaab oo loogu talagalay isticmaalka, kan aasaasiga ah, kaas oo laga helo webka. Iyo codsiga ugu sareeya ee la soo dejiyey in laga isticmaalo PC. Iyada oo AppStudio, waxaad leedahay suurtogalnimada inaad ka abuurto codsiyada xoqan, ama qaado shshadihii hore ee codsiga ama abuuray dad kale horay. Vidal wuxuu soo bandhigay codsiyo kala duwan oo laga sameeyay AppStudio, ujeedooyin kala duwan, dalxiis, gaastrooni, ecology, iyo baqshiish.
Waxay xiiso u tahay dhinacyada caqabadaha iyo tixgelinnada ay qaadanayaan marka la go'aaminayo in la abuuro codsi iyo maxay yihiin farqiyada u dhaxeeya horumarinta codsiyada barnaamijyada iyo abuura AppStudio.
"Caqabada AppStudio waxay ahayd in ay leedahay barxad si sahlan loo isticmaali karo, dhaqaale ahaanna loo heli karo dadweynaha, taas oo fududeeynaysa horumarinta dalabyada wadaniga ah iyo in loo qeybin karo dhammaan mashaariicda"
Haddii uu jiro dadaal si aad u bilowdo abuuraya codsi codes gaarka ah ee barnaamijyada, fiira, waayo, waa qaali ee dareenka kasta (aad leedahay si ay leeyihiin ballaadhan dhaqaale, aadanaha iyo caasimada waqti) sidoo kale sheeg sida ay u qaybin doonaan codsiga, qeexaan xuduudaha ammaanka; sida samaynta codsiga dadwaynaha ama mid gaar ah dadka isticmaala. Waxaa kaloo muhiim ah in la tixgeliyo dayactirka iyo casriyaynta, oo sida caadiga ah waa mid adag ugu maxaa yeelay waxa ay ku lug leedahay waqti badan.
Waxaa la fahamsan yahay in AppStudio, kharashka fududeeyey, labada waqti ee waaxda maaliyadda, sidoo kale waa cajiib fududahay in la isticmaalo (gaar ahaan kuwa aan la xiriira dunida ka mid ah barnaamijyada oo weligayo xiriir la content kasta ee noocan ah); uma baahnid inaad noqotid horumariye qibrad leh. AppStudio, wuxuu ku salaysan yahay ArcGIS Runtime xarooda maktabadaha kala duwan oo u oggolaan falanqaynta iyo map bandhigay, iyo sidoo kale ka mid ah codsi mobile, taas oo u kiciyaan karo waxa ay soo bandhigay final ka hor inta aanay soo diraya in ay dukaamada app kala. Shaqeeya dhufto ee kala duwan, taas oo lagu daray kale, tan iyo markii ay la odhan karaa in xayiraad on isticmaalka by nidaamka ka hawlgala.
Waayo, codsi hooyo waxaa lagu taageeray on nidaamka 5 (macruufka ah, Android, Windows, Linux iyo Mac), waa in aad u curiyaan jeer 5 code ee barnaamijyada (5X), halkan mid ka mid ah dhibaatooyinka dadka isticmaala caadiga ah, laakiin aad hore Waxaa xalliyay ApStudio (1X - lambarka koodhka isticmaalka badan). Tani waxay u maraysaa Qt - teknoolajiyada Qaab-dhismeedka.
Waxa intaa dheer in comments soo noqnoqda on halleeyo lillaahinimada iyo isticmaalka AppStudio, ugu qiimaha badan waxay ahayd in ay arkaan dhowr codsiyada abuuray madal this, sida: TerraThruth, Turt ama nolaato Marine Unit Explorer, taas oo tusaale u ah dhimista qashinka waqti tan iyo markii ay ahayd waxaa lagu sameeyay toddobaadyo 3 oo keliya.
Iyadoo tusaale ahaan, webinar waxay bilowday tallaabooyin bilow ah si loo abuuro a codsi fudud oo u dir qaybaha dukaamada app, xoogga saaraya inaadan lahayn khibrad ku filan barnaamijka GIS, marka aan aragno interface of AppStudio platform for desktop.
Farsamooyinka waa kuwo raaxo leh, oo sahlan in la helo; cusboonaysiin kasta oo dheeraad ah ayaa lagu daray, figradaha ayaa lagu martiqaaday mashruuca waxayna ku xiran tahay waxa mawduuca la soo bandhigayo. Tusaale ahaan, waxaan isticmaalnay macluumaadka shirkad la yiraahdo Gallery, oo looga baahan yahay sameynta dalab si loo muujiyo goobta dhacdooyinka la xiriira farshaxanka u dhexeeya Palermo - Recoleta iyo Arts Circuit.
Foomka Maabka Map ayaa loo doortay shirkaddaan sababtoo ah waxaa loogu talagalay inay soo bandhigto sharraxaadda mawduuca qaarkood; mid ka mid ah ujeedooyinkeeda waa in ay ku xiran tahay wixii Khariidado sheeko oo hore loo abuuray. Sifooyinka asaasiga ah waxaa lagu meeleeyaa: cinwaan, subtitle, sharaxaad, tags, iyo aragtida koowaad waa la helayaa.
Sii wad naqshadeynta arjiga ka dib marka aad dooranaysid qaab-dhismeedka, adoo adeegsanaya sifooyinkaa, waxaad dooranaysaa muuqaalka taariikhda, font iyo cabbirka bandhigga. Safarka Maab ee la xidhiidha template ayaa la abuuray, kaas oo ku xirnaan doona codsiga iyadoo loo marayo aqoonsi.
Dabadeed, calaamadda aad ku yeelan doonto dukaanka appka ayaa la xushay, iyo sidoo kale sawirka la arki doono inta lagu jiro codsiyada codsiga. Ku darida shaybaarka ama shaybaarka, waxaa kale oo suuragal ah, oo waxaad ku dari kartaa sida ugu badan ee loo baahan yahay, waxaa ka mid ah, tusaale ahaan: xidhiidha in camera qalab, meel-waqtiga dhabta ah, akhristaha code bar ama sugida ku dhex akhrinta faraha.
Waxaa ku qoran oo dhufto ee akhrineyso, haddii PC, Tablet ama casriga ah, haddii aad rabto in dhammaan saddexda dhufto ee la dooran karo, iyo ugu dambeyntii soo fuulaa galay dukaamada online ArcGIS iyo codsiyada web kala duwan.
AppStudio for ArcGIS wakiil ka ah hal-abuurnimo farsamada weyn, ma aha oo kaliya uu u fududayn lahaa shaqo on barnaamijyada, laakiin fududaato in la isticmaalo, xawaaraha oo waxaad samayn kartaa codsi loogu talagalay ujeeddo gaar ah oo aad u arki karo oo dhan dukaamada app . Sidoo kale, mid ka mid ah dhibcood ugu xiisaha badan waa in ay u saamaxdo imtixaanka - imtixaanka sida doonaa waayo-aragnimo user.
Waxaad dhihi kartaa in codsiyada waxaa abuuray muuqaalada diiradda lagu saaray horumarinta meel bannaan, waxay leeyihiin wax badan ay u geoengineering, sababtoo ah codsiyadaas karta iney u oggolaadaan xidhiidhka wanaagsan ee u dhexeeya oo ah falanqeeye iyo user marka la eego deegaanka. Codsi kastaa uu leeyahay awood u leh inay xogta soo dir GIS daruur ka dibna go'aan sameeyaan, taas oo inoo keenaysaa in la sheego in uu noqon doonaa qodobbada muhimka ah ee soo koraya deegaan ka badan xiran, halkaas oo khayraadka iyo qalabka teknoolajiyeed in ay dadka dhexgalaan khibrada isticmaalaha
AppStudio waa mid ka mid ah cutubyada Koorsada Advanced ArcGIS Pro
Post Previous«Previous Venezuela ka tag waqtiga waqtigooda
Post Next Maxay tahay ballanqaadkii casinos ee noqda shirkado waari karaNext »